Jupiter Series 3P / 3P Uhlolwe High Frequency luguqulelo ezixineneyo ye kabini-ukuguquka online UPS kunye imveliso ngamandla factor 0.8. Ukusuka 10KVA ukuya 30KVA, its ziyilwe imizila ezincinane kunye nobugcisa DSP kunye igalelo kuyilo ulungiso lwamandla into esebenzayo ukuqinisekisa iimeko imveliso ombane ezingcono, umgangatho amandla kunye nokusebenza ngamandla ngawo onke amaxesha. Its amagalelo lwa ezimbini izakuqinisa ukuthembeka amandla kummandla ngamandla kumahlandinyuka.
1.Online double technology zoguqulo kunye ulawulo DSP
2.Output amandla factor 0.8
Kuthelekiswa UPS online kwimarike lwangoku, Jupiter series (PHT3110 ~ PHT3330) UPS aqhelelkileyo inika ngcono amandla output factor ukuya ku 0.8. It inikeza yokusebenza ephezulu kunye nokusebenza zokusebenza ezibalulekileyo.
operation mode 3.ECO for okonga umbane
Uyababonelela ukusebenza phezulu 97% ukunciphisa ukusetyenziswa kwamandla kunye neendleko. isicelo amandla UPS nge yokucima emile, ngexesha abuyele ukuguqulwa online kabini xa kukho imfuneko yoko.
4.Emergency amandla off (EPO) umsebenzi
5.Wide lomqolo input ombane (190V-520V)
Jupiter series uyakwazi ukunika amandla esitalini kumacebo enxulumene phantsi imeko lwamandla ezingazinzanga.
• Isiphumo amandla factor 0.8
• Adjustable amanani ibhetri
• SNMP + USB + RS232 zonxibelelwano ezininzi
• Uhlolo N + X komsebenzi ukufana
10KVA-30KVA (in-ezintathu kunye outs ezintathu)
3 x 400 VAC (-isigaba 3 + N)
190-520 VAC (3-isigaba) @-50% umthwalo; 305-478 VAC (3-isigaba) @ 100% umthwalo
AC Voltage umMiselo (Batt. Mode)
≦ 2% THD (Linear Layisha); ≦ 5% THD (Umthwalo Non-linear)
Ukutshaja Current (Max.)
16pcs (16-20 adjustable) imitya X2
Gumbini recharge Time
isimo UPS, inqanaba Umthwalo, inqanaba Battery, Igalelo / Imveliso ombane, Ukuchithwa xesha, iimeko Icala
Yixina zonke imizuzwana 4
Yixina kabini ngomzuzwana yonke
Ngaphantsi kwe 60dB @ 1 Meter
Ngaphantsi kwe 65dB @ 1 Meter
Previous: 40-120KVA High Frequency Online UPS (3: 3) Okulandelayo:6-10KVA uhlolwe High Frequency (1: 1)